नेपालमा कण्डमको प्रयोग घट्दै, वर्सेनि करिब ६१ लाख कन्डम वितरण - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालमा कण्डमको प्रयोग घट्दै, वर्सेनि करिब ६१ लाख कन्डम वितरण
काठमाडौं : चिकित्सकहरुले नेपालमा कन्डमको प्रयोग सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन् ।
एड्स हेल्थकेयर फाउन्डेसन (एएचएफ) नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. सूधा देवकोटाले कन्डमको प्रयोग बढाउन देशव्यापी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
केन्द्रले गरेको सर्भेअनुसार नेपालमा करिब ६५ प्रतिशतले मात्रैले कन्डमको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले कम रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘कन्डमको प्रयोग बढाउन सकिए, एचआईभी एड्सको संक्रमण र यौनरोग हुनबाट रोक्न सकिन्छ’, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार केन्द्रले वर्सेनि करिब ६१ लाख कन्डम वितरण गर्दै आएको छ । जसअनुसार गत वर्ष ६० लाख ९८ हजार कन्डम वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा एएचएफ नेपालका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. उन्नत श्रेष्ठले एचआईभी संक्रमण हुन नदिने कन्डम ९५ प्रतिशत सुरक्षित रहेको बताए ।
कन्डम ९८ प्रतिशत सुरक्षित र विश्वसनीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘धेरैलाई कन्डम प्रयोग गर्दा यौन सन्तुष्टि नहुने भ्रम रहेको छ’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘तर आजभोलि कन्डम पनि धेरै प्रकारका पाइन्छन् । जुन लगाएको अनुभूतिसमेत हुँदैन ।’
उनले कन्डमकै कारण एचआईभी संक्रमणको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै कन्डमले बिबाहित महिलाहरुमा अनिच्छित गर्भसमेत नियन्त्रण हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा एएचएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक दीपक ढुंगेलले अन्तर्राष्ट्रिय कन्डम दिवसको अवसरमा संस्थाले देशभरका १५ वटा एआरटी सेन्टरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए ।
उनले महासंघले स्थानीय तहमा स्थानीय भाषामा कन्डमको प्रयोग गर्ने तरिका तथा यसको फाइदाबारे जनचेतना फैलाउँदै आएको बताए ।
प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय कन्डम दिवसमा विश्वभर मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको दिवसको नारा ‘सेफर इज सेक्सी’ रहेको छ।
ट्याग्स: Condom Use in Nepal